YuIP.org - Arag dadweynaha iyo kuwa gaarka ah IP IP Online aad.
YuIP.org Isticmaal site YuIP in la ogaado in aad IP, si loo hubiyo dekedaha furan, sidoo kale tijaabiyo qarsoon si server kala duwan oo adduunka ah oo ku siin Ping amarka online.
Muuji Your IP
Your IP on internetka
Your IP Network Local
Your IP on internetka, anigu waxaan ku tilmaamayaa in cinwaanka IP dadweynaha, taasoo la micno ah in cinwaanka IP in website kasta oo aad ka heli waxaa ka arki kartaa. Haddii aad isticmaalayso server wakiil ah IP dadweynaha u dhigma dhagaystayaasha aad IP server wakiil.
Your IP on LAN ah, tani waa isku mid sida cinwaanka IP gaarka ah. IP waxa laga heli karaa oo keliya qalabka ku xiran yihiin aad network degaanka. Si aad u aragto cinwaanka IP aad on helitaanka LAN ee this site waxaa ku talinaynaa isticmaalaya browser Chrome ama browser Firefox, sababtoo ah qof kasta oo aan u arki kartaa.
Gudbin IP u dhiganta Ciwaanka IP: ga ah oo leh ujeeddo si loo ogaado qalab si ay u helaan goobta internetka iyada oo loo marayo server wakiil HTTP ah. Waxaa macquul ah in server wakiil aad loo qaybiyay in aan soo bandhigo aad IP gudbin. Ma jiraan xaalado kale oo gudbin IP waa la isticmaalayo in load isku dheeli tiran.
Your ISP, arimahan isku dayaan si ay u aqoonsadaan shirkadda mas'uulka ka ah xiriir aad internet.
qarsoon celcelis ahaan, waxaan ula jeedaa qiyaas ahaan waqtiga si aad internet loo diro loona helo amarka yar in website a. Tani waxay dhacdaa waqti kasta iyo mar kale marka aad ka heli website a. Sidaas daraaddeed gaaban waqtiga, si degdeg ah loo diro loona helo nidaam comandos.O isku dayi doona in la sameeyo baaritaan qarsoon ee aad internet isticmaalaya server ugu dhow Aws aad awoodo.